Ugu Fiican 24 OZ Soosaaraha iyo Wershada Saxanka Qamadiga ah | Tuoda
TD-DG-CJ-007 Cawska sarreenka 15cm baaquli
Makiinada badarka ee aan la jabin karin - 24 oZ Qamadi Caws Fiber ah oo Makiinada khafiifka ah dejisa 4 - Makiinada weelka & Microwave badbaado leh - oo loogu talagalay , Bariis, Galabyada maraq
Cabirka Alaabta 15*7.3cm
Miisaanka Shayga 65g
【Faa'iido leh】Mikrowave iyo weelka weelka wax lagu dhaqo badbaado leh. fududahay in la nadiifiyo. Fiiro gaar ah: iska caabin heerkulku wuxuu gaaraa ilaa 120 ℃.
【Caafimaadka & deegaanka-saaxiibtinimada leh】 Waxa laga sameeyay caws qamadi dabiici ah oo saaxiibtinimo leh, istaarij iyo walxo PP ah oo badbaado leh. BPA BILAASH AH, gebi ahaanba aan sun ahayn, kuma jiraan wax caag ah ama dahaar ah.
【Dhulka ilaali】Eco-saaxiibtinimo,Ka hortagga wasakhowga. Maddiibadeena cawska sarreenka ahi waxay noqon kartaa doorasho ku habboon beddelka baaquli caag ah.
【Naqshad gaar ah】 Lagu nashqadeeyay qaab meel-badbaadin ah iyo geeso siman oo wareegsan, iftiin lagu hayo oo ammaan ah in la isticmaalo; adag oo waara, gooyay dhismo adkaysi u leh, werwer ha ka qabin inay jabto mar uu hoos u dhaco, baaquli weyn oo maraq bariis ah.
Hore: Caws qamadi 11cm saxan maraq bariis baasto ah
Xiga: 30 OZ caws weyn oo qoto dheer oo qamadi ah Salad Salad
baaquli salad 24 oz
baaquli caws sarreen
maddiibadihii caws buu sarreen